Indonezia : Fahefan’ny Vahoaka 2.0 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2018 13:18 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jona 2009)
Andro roa taorian'ny nivoahany tany am-ponja [amin'ny teny indoneziana], ny alarobia 3 jona 2009, no nitranga ny fitsarana voalohany tao amin'ny fitsarana nanenjehana an-dRtoa Prita Mulyasari. Nosamborina ary nalefa tany am-ponja ity vehivavy mpikarakara tokantrano ity nanomboka tamin'ny tapaky ny volana Mey, nampangain'ny hôpitaly iraisam-pirenena iray ho ”nanala baràka” tamin'ny famoahana taratasy fitarainana an-tambajotra tao Tangerang, iray amin'ireo faritra ivelan'i Jakarta renivohitra.
Niteraka fanehoankevitra nivaivay tao amin'ny tontolon'ny blaogy indoneziana ny fisamborana azy. Blaogera maro no mihevitra fa mampiseho ny tsy fahampian'ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny firenena ny fanagadràna azy.
Raha toa ka kasaina ho atao amin'ny volana manaraka ny fifidianana, toa lasa zava-dehibe sy maika tampoka ho an'ireo kandidà telo mifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny raharahan-dRtoa Prita Mulyasari.
“‘Miteny ny mpanjifa, dia mankany am-ponja” (petadrindrina nataon'i Antyo Rentjoko, nozarain'i Enda, ambany lisansa CC )
Ankehitriny, marobe ireo indoneziana manaraka akaiky ilay raharaha. Niforona tao amin'ny Facebook ny vondrona maro, izay manana mpanohana mitotaly 316 448, mba hanohanana an-dRtoa Prita Mulyasari sy hanehoana hevitra mikasika ilay raharaha, raha toa ka, ireo mpampiasa ny Twitter any amin'ny misy azy kosa, manaparitaka ireo vaovao sy fanavaozana mikasika ireo antsafa farany ho an'ny mpanao gazety ary ny adihevitra farany tao amin'ny fitsarana .
Tamin'ny anaran'ny Ministeran'ny fifandraisana sy ny fampahalalam-baovao indoneziana, nanambara ny mpiasampanjakana iray, toy ny taterin'ny gazety Kompas, hoe: ”sahiran-tsaina amin'ny fisamborana an-dRtoa Prita ny Ministera”, sady manampy fa tokony hanatsara ny kalitaon'ny tolotra omeny ny hôpitaly fa tsy manenjika ny marary ao aminy noho ny fanalana baràka. Mankahery ireo olontsotra ihany koa mba tsy hatahotra ny haneho ny heviny malalaka ny Depkominfo.
Ny alina nialoha ny nitsarana azy, nikarakara antsafa ho an'ny mpanao gazety ireo tomponandraikitra ao amin'ny Omni International Hospital . Nanatrika ny fitsarana voalohany tamin'ilay fitsarana nampifanandrina an-dRtoa Prita Mulyasari sy ny Omni Hospital ny blaogera Enda Nasution [amin'ny teny anglisy] ary namoaka tatitra.
Tatitr'i Enda mikasika ny antsafa ho an'ny gazety, tao amin'ny Facebook :
Mitodika amin'ny Jakarta Globe [amin'ny teny anglisy], nanambara i Rtoa Prita fa voadona tamin'ireo herinandro telo niainany tany am-ponja izy. Nivoady tamin'ny tenany izy hoe tsy haneho hevitra an-tambajotra intsony taorian'ny niainany ity trangan-javatra henjana ity.
Azia Atsinanana22 Septambra 2021